Politics – SOOMAALPEDİA
wararka ka hadlay siyaasada.
Daawo: Midnimada waa muqadas
Qaar ka mid ah Shacabka ku nool deegaanada maamulka Somaliland ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay diidan yihiin ama ka soo hor jeedaan in la kala qeeybiyo umada Soomaaliyeed kuwaas oo inta badan Banaanbaxyo dhiga. Hooyooyin fara badan ayaa dhiga Banaanbaxyo ay ku cabirayaan shucuurtooda waxeeyna sheegeen in Shacabka Soomaaliyeed yihiin dad yar oo walaalo … More Daawo: Midnimada waa muqadas
Degdeg: İtoobiya oo la wareegtay garoonka Cadaado
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Cadaado oo hadda Xarun KMG u ah Galmudug ayaa sheegaya in Ciidamo Itoobiyaan ah ay la wareegeen Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud. Ciidamada Itoobiyaanka ah ee gaaray Maagalada lana wareegay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Cadaado ayaa watay sida la xaqiijiyay ilaa 8 Gaari,kuwaas oo Fariisimo ka sameystay Garoonka. Warar … More Degdeg: İtoobiya oo la wareegtay garoonka Cadaado
War culus: Dagaalada Afgooye oo diyaarado ka qayb galay
Ciidamada dowladda iyo AMISOM ayaa maanta la wareegay deegaanka Sabiib oo qiyaastii 10-KM dhanka Galbeed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kadib markii saaka ay weerar ku qaadeen. Sida ay sheegayaan wararka dagaalka oo bilowday abaarihii salaadii subax ee saaka ayaa soo gaaray illaa maanta duhurkii, iyadoo rasaas culus laga maqlayay Afgooye iyo … More War culus: Dagaalada Afgooye oo diyaarado ka qayb galay
Masuuliyiin ka tirsan dowlada Kenya ayaa jeediyay khudbado muujinaya siday u dhibsadeen una neceyb yihiin dadka Soomaaliyeed ee qaxooti ahaan u degan xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya. Henry Rotich oo ah wasiirka maaliyada ee dowlada Kenya ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ku qabaan dadka qaxooti ahaan u jooga xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, wuxuuna … More Degdeg: Nacaybka Keenya ee Soomaalida oo laba kacleeyay
Waxaa dhowaan Magaalada Jabuuti kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxman Maxamad Faroole. Labada siyaasi oo aan siyaasadda isaga harin, haddana ah musharixiin u taagan jagada madaxweynaha Soomaaliya ee 2016 ayaa kulankooda dad ku dhow waxay sheegeen inay uga hadleen xaaladda Soomaaliya iyo doorashadda … More War culus: Sh.shariif & Faroole oo isku raacay hal arin oo ku saabsan 2016..
Uganda oo looga digay in ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya
Waxaa magaalada Kampala, gaar ahaan Madaxtooyada dalkaasi ku kulmay Madaxweyne Yoweeri Museveni iyo Wafdi ka socda Beesha Caalamka. Kulanka ayaa waxa uu ku saabsanaa burburinta go’aanka ay Dowlada Uganda ka gaartay Ciidamada ka jooga Somalia, waxaana kulankaasi isla hogaaminaayay Museveni iyo Safiirka Maraykanka iyo Madaxa ergadda Yurub u jooga Kampala Deborah Malac iyo Kristian Schmidt. … More Uganda oo looga digay in ciidankeeda kala baxdo Soomaaliya
Qunsuliyadaha keenya ee Soomaaliya
Danjiraha Kenya u jooga Somalia, Lucas Tumbo ayaa sheegay inay dhowr Qunsuliyad ka furan doonaan Somalia, si ay taasi gacan uga geysato in lala socdo dhamaan dadka Kenyanka ee ku nool gudaha Somalia. Danjiraha ayaa hadalkaasi ka yeeshay Wareysi uu Xafiiskiisa Muqdisho ku siiyey Wargeyska The Star, wuxuuna carrabka ku dhuftay inay diiwaan-geliyeen inay Somaliya ku … More Qunsuliyadaha keenya ee Soomaaliya
Qulqulka siyaasiyiinta somaliland ee xamar
Wararka soo baxayo ayaamahan ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho ay kusoo qulqulayaan mas’uuliyiin Somaliland ah kuwaasi oo xilal soo doontay. Waxaa guddoomiyaha Maxkamadda sare loo magacaabay Garyaqaankii guud ee Somaliland waxaana taasi ay timid wada hadallo hoose oo jiray. Waxaa hadda la filayaa in xilal kale loo magacaabo xubno kale oo Somaliland ah sidoo kale … More Qulqulka siyaasiyiinta somaliland ee xamar